Ahoana no hanadinoana izay tianao ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ahoana no hanadinoana izay tianao. Isika rehetra dia efa nifankatia tamin'ny fotoana iray teo amin'ny fiainantsika. Adventures, fihomehezana, sakafo hariva, hatezerana, ... Miaina fotoana manokana miaraka amin'ny olon-kafa ary tsy maniry izany tsy ho tapitra, saingy indrisy fa tsy izany foana no mitranga.
Na dia mety tsara aza ny mahita azy ny olona tonga lafatra amin'ny fiainana, tsy tratra foana izany. Mety tsy hitovy ny tanjonao na tokony hisaraka tsotra izao ny fiainanao. Eto no tonga ny olana lehibe, ahoana no hanadinoanao izay tianao?
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanome toro-hevitra maromaro izahay manampy anao hanadino fitiavana taloha ary hoe afaka mandroso ianao dia sahy mamaky azy ve ianao?
1 Ahoana no hanadinoana ny olona tianao tsikelikely
1.1 1. Tapaho ny fifandraisana
1.2 2. Tsy azo ihodivirana ny mieritreritra an’ilay olon-kafa
1.3 3. Mieritrereta anao
1.4 4. Miresaha amin’ny olona itokianao
1.5 5. Mahazo aingam-panahy avy amin'ny olona izay naharesy izany
1.6 6. Mahareta amin'ny fanaintainana
1.7 7. Mifantoha amin'ny ankehitriny
1.8 8. Tsarovy ny kileman'ny taloha
1.9 9. Mampiasa vola amin'izay tianao
1.10 10. Aza manome tsiny ny tenanao
1.11 11. Manaova ody mba hanadinoana izay tianao
1.12 12. Vavaka
Ahoana no hanadinoana ny olona tianao tsikelikely
Manaraka izany dia homenay ianao Toro-hevitra 12 mba ho tanterahanao sy ho tratrarinao ny tanjonao dia ny hanadinoanao izay tianao sy hahafahanao manohy ny fiainanao.
1. Tapaho ny fifandraisana
Ny torohevitra voalohany omenay anao momba ny fomba hanadinoana ny olon-tianao dia ny manapaka ny fifandraisana amin'ny taloha . Na amin'ny olona izany, na amin'ny tambajotra sosialy, na amin'ny telefaona, ny fifandraisana aorian'ny fisarahana dia hanokatra indray ny ratranao. Olona maro no tsy miraharaha an'io dingana io ary mety hiverina indray, ka manaisotra ny fahasitranany ara-pihetseham-po mba hahazoana ny taloha.
Raha tsy afaka manapaka ny fifandraisana ianao, dia tsy ho hadinonao izany fitiavana izany, na dia narary aza ny fiarahana. Ary koa, tsy maintsy manala ny zavatra sy ny fanomezana izay nomeny anao mba tsy hieritreritra azy.
2. Tsy azo ihodivirana ny mieritreritra an’ilay olon-kafa
Na dia toa mampisafotofoto aza, Arakaraka ny hiezahanao tsy hieritreritra an’ilay olon-kafa no hiheveranao azy. Araka ny voalazan'ny psikology, rehefa miezaka manadino ny taloha isika dia mahazo ny vokatra mifanohitra amin'izany. Mifantoka amin'ny tsy fitadidiana ny eritreritsika, ka efa mieritreritra an'io olona io ianao.
Aza terena, tsy azo ihodivirana fa indraindray ireo fotoana niainanao ireo no tonga ao an-tsainao. fotsiny aza variana miaraka aminy ary mandrosoa.
3. Mieritrereta anao
Amin'ny fikatsahana hahatakatra ny fomba hanadinoana ny olon-tianao, dia afaka mampitombo ny fiankinan-doha ianao noho ny adin-tsaina, ny havizanana ary ny tebiteby. Mba hiatrehana ireo rehetra ireo Voka-dratsy tsy maintsy miala sasatra sy miala sasatra ianao. Tokony ho fantatrao ny zavatra ilainao amin'izao fotoana izao ary sarony izy ireo. Miankohofa, miakanjo ary miezaha tsy hilentika ao anatin'ny fanirery, eNy fiafaran'ny fifandraisana dia fiovana lehibe tsy maintsy atao amin'ny fahasalamana sy ny faharetana .
4. Miresaha amin’ny olona itokianao
Ny fanalana enta-mavesatra amin'ny namana azo itokisana dia azo atao manampy ny olona iray handresy ny tsy fahatokisany. Ny fitenenana dia manampy ny fontsika hanala izay rehetra entintsika ao anatiny ary hanamora ny fahatakarana ny fihenjanana sy ny fanahiana iainantsika. Miezaha hahatakatra ny fihetseham-ponao jereo ny zava-misy amin'ny fomba fijery hafa.
5. Mahazo aingam-panahy avy amin'ny olona izay naharesy izany
Tsy mora ny miala amin'ny fisarahana, ary mety ho sarotra aminao ny manao izany. Ny fomba tsara hahitana fa azo resena io fisarahana io dia ho fitaomam-panahy avy amin'ny olona ankafizintsika sy izay nandalo toe-javatra mitovy amin'izany. Amin'izany fomba izany, dia afaka mandrisika antsika amin'ny fahatakarana ny fomba nandresen'izy ireo ny fisarahana.
Azonao atao ny mahita ireto references ireto ao amin'ny:
Tranonkala sy bilaogy: Misy fantsona noforonina manokana ho an'ny mpanjifa mba hianatra fifandraisana mahasalama, ao anatin'izany ny fampitsaharana azy ireo.
Horonantsary na famoahana amin'ny tambajotra: Amin'ny maha-fitaovana fifandraisana haingana, dia hahazo torohevitra avy amin'ny olona iray momba ny fomba hanadinoana olona iray foana isika.
Soso-kevitra avy amin'ny namana: Raha toa ka efa nandalo toe-javatra mitovy amin’izany ny namana akaiky iray, dia miezaha miresaka aminy ary manentana ny fanahiny amin’ny fiovana nataony.
6. Mahareta amin'ny fanaintainana
Na dia toa tsy azo atao aza izany, Ho afaka amin'ny fanaintainanao ianao noho ny fisarahana. Izany dia mitaky ny hanajanao ny fanaintainanao ary hiaina amim-pahatoniana ity dingana fisarahana ity. Rehefa miezaka miala amin'ny alahelon'ny fisarahana amin'ilay olon-tianao ianao, dia manaova hetsika mahafinaritra ary mitadiava ny fanohanan'ny namanao akaiky indrindra.
Ankoatra izany, aza mampitaha ny tenanao amin'ny olona nahavita ny fisarahana haingana. Omeo fotoana ny sainao handaminana ity fisarahana ity amin'ny fomba matotra sy tompon'andraikitra.
7. Mifantoha amin'ny ankehitriny
Ny toro-hevitra fahafito momba ny fomba hanadinoana ny olon-tianao tsy mieritreritra ny ho avy miaraka na hihazona ny lasa. Ny fahadisoana mahazatra dia ny maka sary an-tsaina ny zava-misy tsy mety hitranga fa tsy mifantoka amin'ny ankehitriny sy ny fahamatorana. Ankoatra izany, ilaina ny mahatakatra ny antony nisara-panambadianao, mamakafaka sy mitadidy fa tsy tsara ny toe-javatra ary samy tsy nety ianao.
8. Tsarovy ny kileman'ny taloha
Rehefa misaraka amin'ny olona iray isika dia manana fahazarana tsy mahatsiaro afa-tsy ny tsara, fa tadidio fa raha nandao azy ianao dia satria tsy ny zava-drehetra no mamy. Miezaha mba eritrereto ny kileman'izy ireo sy ny toe-tsainy miiba mba tsy hiverenan'izany na alaivo sary an-tsaina ny fifandraisana tonga lafatra. Izany rehetra izany dia tsy midika fa tsy maintsy mankahala azy ianao, lavitra azy, fa tsy midika izany fa manana azy eo ambony alitara ianao.
9. Mampiasa vola amin'izay tianao
Raha mbola manasitrana ny fonao dia azonao atao ataovy izay hifantoka amin'ny hetsika mahafinaritra anao. Azonao atao ny miverina amin'ny hetsika taloha izay tianao na mahita zavatra vaovao mampifaly anao. Ho fanampin'ny fahatsapana fahombiazana, amin'ity fomba ity dia hanomboka hanana fahazarana sy fialamboly izay tsy hidiran'ny taloha ianao.
10. Aza manome tsiny ny tenanao
Ny fahadisoana mahazatra dia ny fiheverana fa ny fisarahana dia fahadisoanao ihany. Aza mahatsiaro tena ho meloka Raha heverinao fa tsy nahavita ny asa ianao, dia olombelona manana lesoka sy finiavana voajanahary isika ka noho izany dia mora manao fahadisoana. Ary koa, ny tsy fifanarahana eo amin'ny fifandraisana dia mety handroaka ny olona.
Koa tsarovy izany samy nanapa-kevitra ny handray an'io fanapahan-kevitra io ianao ary na dia maharary aza izany, dia ho hitanao amin'ny hoavy fa izany no zavatra tsara indrindra azonao atao.
11. Manaova ody mba hanadinoana izay tianao
Amin'ny fikatsahana ny fisarahana, ny olona sasany dia mampiasa ody mba hanadinoana olona iray. Manaraka izany dia hanome ohatra ho anao izahay:
Soraty amin’ny taratasy fotsy ny anarana fenon’ilay olona tianao hohadinoina.
Atsipazo ao anaty rano ilay taratasy ary avereno in-telo ity andian-teny manaraka ity: “Eo amin’ny fiolahana amin’ity renirano ity no mijanona ny korontam-bato. Teo amin'ny fiainako toy ny hazo ianao. Ao amin'ny lalan'ny fiainana, efa lasa ianao izao.
Mba hanaovana izany fanao izany dia mila manana finoana ianao fa hahomby izany. Izy io dia a fanatanjahan-tena izay manampy anao hanadino io olona io, mihoatra noho ny ody ary manana lanja ara-panoharana amin'ny fandresena sy fanadinoana.
Ankoatra ny ody, dia maro ny olona mitodika amin’ny vavaka mba hanadino izany fitiavana very izany. Raha fintinina dia fanazaran-tena iray hafa ny hanesorana ny fitiavana taloha amin'ny fiainanao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia fisaintsainana manala ny fanaintainana tsapanao eo am-panatanterahana ny fihetseham-po sy ny fiainana andavanandro.
Na dia sarotra aza izany, dia hahasoa anao ny mamantatra ny fomba hanadinoana ny olon-tianao. Fotoana izao hifandraisana amin'ny tenantsika sy hihainoana ny faniriantsika. Amin'ny saina mazava kokoa dia afaka manoro ny tenantsika isika ary matotra amin'ny maha-olombelona antsika.
Manantena izahay fa avy amin'ity lahatsoratra ity discover.online dia nanampy anao ary, raha ao anatin'izany toe-javatra izany ianao, dia tadidio fa hifarana io fijaliana io. Ny andro vitsivitsy voalohany aorian'ny fisarahana dia mety ho sarotra, saingy tsy ho ela dia hahita izay ilainao ianao mba hahazoana olona iray.